Nepal Dayari | साउदी, कतार, मलेसिया र युएई जाने युवाको लागि अमेरिकी खोप दिइने, यसरी लगाउन पाइन्छ खोप ..!
असार ३०, २०७८ बुधबार २७७ पटक हेरिएको
सरकारको कोभिडसम्बन्धी विज्ञ समितिका संयोजक डा. श्यामराज उप्रेतीले चिनियाँ र अमेरिकी खोप एकैसाथ उपलब्ध हुने भएकाले श्रम गन्तव्यको मापदण्ड हेरेर वैदेशिक रोजगारीमा जान सुनिश्चित भएका कामदारहरूलाई दिइने भएको हो ।
खोप लगाउनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रमाणिकिकरण गर्नु पर्ने हुन्छ । भिसा लागेको वा पासपोर्टमा भिजा प्रक्रियामा रहेको आधार प्रस्तुत गर्नेले खोप पाउने बिज्ञहरु बताउछन् । चिया गफ बाट